Iskahorimaad Garoowe ku dhex maray ciidamadda amniga kooxo khamrada ka ganacsada – Madal Furan
Hoy > Warka > Iskahorimaad Garoowe ku dhex maray ciidamadda amniga kooxo khamrada ka ganacsada
Garoowe (Madal Furan) – Iska horimaadka Magaalada Garowe xalay ku dhexmaray Ciidamada amniga Puntland iyo Kooxo ka ganacsada khamrada ayaa sababay inuu dhinto hal qof isla markaasna ay ku dhaawacmeen Laba qof oo kale
Ganacsatada Khamrada ayaa watay Saddex gaari oo xambaarsan shixnado khamro ah, isla markaasna ay la socdeen rag hubeysan ayaa isticmaalay rasaas ay kala hor tageen ciidamadda amniga.
Taliyaha xasilinta gobolka Nugaal, Gen. Muxyadiin Axmed Muuse, ayaa sheegay ciidamada amniga iyo dabley hubaysan oo ka ganacsada maandooriyaha uu dagaal dhexmaray kadib markii Ciidamada Ammaanka ay weerareen.
Gaadiidkii ay wateen kooxdan oo ka koobnaa Saddex gaari oo nooca yaryar ah ayaa waxaa ay weli yaalaan goobtii iskahorimaadku ka dhacay, waxaana gacanta ku haya ciidamadda amniga.
Taliyaha ayaa sheegay inay iska caabin kala kulmeen kooxa hubeysneyd ee safrinayey noocyada maandooriyaha, balse ay ka guuleysteen.
Gen. Muxyadiin Axmed Muuse ayaa tilmaamay iska hor imaadkaan inay ku dhimatay qof dumar ah oo ay haleeshay rasaasta la isweydaarsanayay, sidoo kale ay ku dhaawacmeen labo kamid ah ciidamada amniga ee howgalka qaaday.
SAWIRO:-Haan weyn oo daboolan oo ka soo caarisay dekedda Ceel Macaan oo sun looga shakiyey
Duqeymo ciidamada DFS ay ka geysteen deegaan ka tirsan Shabeellaha Dhexe oo ururka Al-shabaab ay isku urursanayeen.